महाशिलाको स्वास्थ्यचौकीमा चौबीसघण्टे गर्भवती र सुत्केरी सेवा
पर्वत । महाशिला गाउँपालिकामा रहेका सबै स्वास्थ्य संस्थामा चौबीसघण्टे गर्भवती र सुत्केरी सेवा विस्तार भएको छ । गाउँपालिकाका छ वटै वडामा रहेका स्वास्थ्यचौकीमा सो सेवा नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न थालिएको ह...
कुष्ठरोगी संख्या झन झन बढ्दै
ललितपुर । गोदावरी नगरपालिकाको लेलेस्थित आनन्दवन अस्पतालमा कुष्ठरोगको उपचारका लागि आउने बिरामीको संख्या बर्षेनी बढिरेहको छ । बहिरङ्ग र भर्ना भएका बिरामीको संख्या बढिरहेको अस्पतालका तालीम संयोजक गोपाल ...
काठमाडौं । अमेरिकामा सुरु भएको फ्लुको संक्रमण झन् तीब्र भएको छ । सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सन (सिडीसी) ले फ्लुका कारण गत सातामात्र थप १६ बालबालिकाको मृत्यु भएको जनाएको छ । योसंगै अमेरिकाभर...
क्यान्सरको जोखिम घटाउन खानुहोस् यी ७ खानेकुरा
दूषित पर्यावरण र खानपानलगायत कारणले क्यान्सर रोगीको संख्या बढ्न थालेको छ । क्यान्सरको जोखिम कम गर्न के खानुपर्छ ? ब्रोकाउली काउली परिवारका सबै तरकारीमा क्यान्सरनिरोधी गुण बढी पाइने गरे पनि ब्रोकाउली...
आज विश्व क्यान्सर दिवसः नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरी मनाईदै
काठमाडौं । विश्व क्यान्सर दिवस, आज नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले सन् २०१६ देखि २०१८ सम्मका लागि ‘हामी सक्छौ, म सक्छु’ भन्ने नारा तय गरेको छ ...
बतैडीको सबै तहमा स्वास्थ्य सुरक्षा संयोजन समिति
बैतडी । बैतडीका १० वटै स्थानीय तहमा स्थानीय तह स्वास्थ्य सुरक्षा संयोजन समिति गठन भएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउन जिल्लाका ६ वटैै गाउँपालिका र चारवटै नगरपालिकामा संयोजन...
रुकुममा सुत्केरी आमा र बच्चाको मृत्यु
रुकुम । रुकुम पश्चिममा सुत्केरी हुन अस्पताल आएकी आमा र बच्चाको मृत्यु भएको छ । चौरजहारी नगरपालिका–१२ की २८ वर्षीया सुशीला विष्ट र उनको बच्चाको चौरजहारी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । घरमा अत्यधिक रक्तस्र...
यस्ता छन् अंगुर खानुका फाईदा जानिराखौं !
काठमाडौं । यतिखेर अंगुरको सिजन छ । अंगु्र हेर्दा जति आकर्षक लाग्छ, उति नै धेरै छन् यसका फाइदा । कब्जियत, अपचदेखि मिर्गौला तथा मांसपेशीका समस्यासम्म अंगुरले फाइदा पु¥याउँछ । अंगुरको त बाहिरी फलमात्र हो...
काठमाडौँ । गत असोजमा गरेको चार बुदेँ सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल चिकित्सक संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । गत असोज १३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र संघ...
स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक शुरु
काठमाडौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक वर्षे कार्यक्रमसहित दातृ निकायसंग वार्षिक संयुक्त समीक्षा बैठक शुरु भएको छ । मन्त्रालयको नेतृत्वमा आजदेखि शुरु भएको समीक्षा बैठकमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आजसम्म भएका...
नगरप्रमुखद्वारा स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिएको दरबन्दीमा जान निर्देशन
भोजपुर । भोजपुर नगरपालिकाका प्रमुख कैलाशकुमार आलेले तोकिएको दरबन्दीमा जान स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन दिएका छन् । स्थानीय सरकारका प्रमुखसमेत रहनुभएका प्रमुख आलेले ग्रामीण समुदायका जनता सुलभ स्वास्थ्य ...
लहान । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले मातहतमा रहेका ७० वटा भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको...
ललितपुर । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२० सम्ममा कुष्ठरोगरहित विश्वको योजना लिएर अघि बढे पनि नेपालमा वर्षेनी करिब तीन हजार नयाँ बिरामी देखा परिरहेका छन् । यस वर्षमात्रै तीन हजार २१५ नयाँ रोगी पत्ता ...
कञ्चनपुर । राष्ट्रिय क्षयरोग निवारण केन्द्रले सदरमुकाम भीमदत्तनगरस्थित महाकाली अञ्चल अस्पताललाई क्षयरोग पत्ता लगाउन अत्याधुनिक जिन एक्सपोर्ट मेशिन शनिबार उपलब्ध गराएको छ । अत्याधुनिक यन्त्र नहुँदा अस...
आठ महिनादेखि अस्पतालमा एम्बुलेन्स सेवा ठप्प
पर्वत । विगत आठ महिनादेखि बिरामी बोक्ने जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्स बिग्रँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । जिल्ला अस्पतालमा रहेको एक मात्र एम्बुलेन्स बिग्रिएपछि बिरामी ओसारपसारमा समस्या भएको छ । विग...
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, कपन क्षेत्रमा दुईवटा ‘जनता स्वास्थ्य केन्द्र’ स्थापना गर्न पहल भइरहेको बताएका छन् । नगरपालिका–१०, कपन, नीलोपुल, प्रगतिनगरका बासिन्...
किन राेक्याे अर्थ मन्त्रालयले बिरामीलार्इ दिइने भत्ता ?
काठमाडौं । मिर्गाैला फेल, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरीका कारण प्यारालाइसिस भएका बिरामीलार्इ सरकारले भत्ता दिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले राेकिदिएकाे छ । सरकारले बिरामीलार्इ मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय...
क्षयरोग पत्ता लगाउने उपकरण जडान
कलैया । क्षयरोग निवारण र नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बारामा क्षयरोग पत्ता लगाउने जिन एक्सपर्ट उपकरण जडान गरिएको छ । उक्त उपकरणबाट दुई घण्टामा नै क्षयरोग पत्ता लगाउन सकिन...
इसिजी र भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालनमा
बैतडी । पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा इसिजी र भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालनमा आएको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति (स्वास्थ्य बीमा) ले पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई इसिजी र भिडियो एक्...
जिल्ला अस्पतालको आधुनिक भवन बन्दै
रोल्पा । जीर्ण अवस्थामा रहेको भवनबाट स्वास्थ्य सेवा लिन बाध्य रोल्पाका बिरामी अब भने आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवनबाट स्वास्थ्य सुविधा लिन पाउने भएका छन् । जिल्ला अस्पताल, रोल्पाको नयाँ भवन एक महिना अगाड...